I-2017 Web Design and Trends Experience Trends | Martech Zone
Sikujabulele kakhulu ukwakheka kwethu kwangaphambilini eMartech kepha besazi ukuthi kubonakala ngathi kukhulile. Yize ibisebenza, ayitholanga izivakashi ezintsha njengakuqala. Ngikholwa ukuthi abantu bafike kusayithi, bacabanga ukuthi kusemuva kancane ekwakhiweni kwayo - futhi bacabanga ukuthi nokuqukethwe kungenzeka. Kalula nje, sine- ingane embi. Sasiyithanda leyongane, sasebenza kanzima ngayo leyo ngane, sasiziqhenya ngengane yethu… kodwa yayimbi.
Ukuqhubekisela phambili isiza, senze ukuhlaziywa okuningi kwezindawo zokushicilela ezazithatha isabelo semakethe. Siqaphele ukuzulazula kwabo, ukwakheka kwabo, amafonti abo, izakhiwo zabo eziphendulayo eziphathwayo, ukusebenzisa kwabo abanye abasebenzelana nabo, ukukhangisa kwabo, nokuningi. Siphinde safuna isiza lapho singafaka khona izici eziningi nokusebenza esasikucindezela phambilini kuma-plugins futhi sasebenza ukuqinisekisa ukuthi yimisebenzi yengqikithi yengqikithi. Lokhu kuzosiza isivinini sesiza sithuthukise futhi sinciphise ithuba lezingxabano noma okunye ukungahambelani kokusebenziseka.
Kusebenzile. Indawo yethu ithrafikhi iphakeme ngama-30.91% ngesikhathi esifanayo ngonyaka odlule. Ungalibukeli phansi inani lokuhlangenwe nakho kwabasebenzisi bakho nomthelela wakho ekutholweni nasekugcinweni.
Uma sekuyisikhathi sokunikeza isiza sakho ukuphinda kulungiswe ubuso futhi… kunamathuba amaningi laphaya okusiza ukuthuthukisa ulwazi lomsebenzisi (UX) lwezivakashi zakho. Ukuphela Okujulile hlanganisa le infographic neminye imibono lapho ungabheka khona ugqozi lokuklama.
Njalo ngonyaka kusilethela iqoqo elisha lamathrendi esingalindela ukuwabona evela kumawebhusayithi. Kepha ukuba yi-ejensi engagxili enqoleni ethambekele, sifune ukwakheka kwewebhu okuyishumi okuthembisayo kakhulu nezindlela zokuhlangenwe nakho komsebenzisi zango-2017 ezingasetshenziselwa ukuthuthukisa ukuguqulwa kunoma iyiphi iwebhusayithi. Lokho kungamakhasimende amaningi, amaklayenti noma imikhondo ephaketheni lakho, okuyindlela enhle yokukhala onyakeni omusha.
I-Web Design kanye ne-UX / UI Trends
Idizayini Ephendula Iminyaka - Iminyaka ehlukene yobudala izosabela ngokuhlukile ngokuqukethwe okuhlukile, ukwakheka nokukhetha ngobuhle.
Ama-Skeleton Screens - ukulayisha ikhasi ngezigaba, kusuka kokulula kuya kokuyinkimbinkimbi ukuze amakhasimende akwazi ukubona ukuthi yikuphi okuqukethwe okuzayo.
Ama-Engagement Bots - Hlanganyela nabasebenzisi ngolwazi oluthuthukisiwe lwamakhasimende nokuhola isizukulwane ngaphandle kokusebenzisa i-AI chat bots.
Inqola Yokuthenga - ukunikela ngama-upsell, okunikezwayo okuyinqwaba, nokuthengiswa okuphambanayo ngesikhathi sokuphuma ukukhiqiza imali eyengeziwe.
Izinkinobho zokubizela esenzweni ezigqwayiziwe - Sebenzisa izithombe ezilula nezicashile ukubheka izinkinobho zakho ngokukhuphuka kokuchofoza.
Izithombe zeCinemagraph Hero - okuyingxenye yesithombe, ingxenye yevidiyo, ama-cinemagraphs akusetshenziswanga kepha kuvusa intshisekelo enkulu.
Umhlaziyi Amavidiyo we-Persuader - Sebenzisa abantu bangempela njengobufakazi bamakhasimende namademo womkhiqizo ukunqoba ukuphikisana nokuvala ukuthengiswa.
Ukumbondelana kokuphuma kwevelu - sebenzisa okunikezwayo kokuphuma esikhundleni sokumbondelana okucasulayo lapho othile ezoshiya isiza sakho.
Ukufa Kwekhasi Lasekhaya - amakhasi wokufika aqondene nokuziphatha kanye nezithameli azobhekisa kangcono inani labantu kanye nokuziphatha okuhlukile.
Ukuzulazula kweTrumps Navigation - okubaluleke ngaphezu kokugcina okuqukethwe phezulu kwamakhasi amaningi ukutshela indaba ephoqelelayo ekhasini elilodwa.
Tags: 2016izitayela zokuklamauidesign uiisipiliyoni somsebenzisiisikhombimsebenzisi somsebenzisiuxukwakheka kwe-ux
Ababhali Abangaphezu Kwikhulu Babelana Ngolwazi Lwabo Encwadini Engcono Yezebhizinisi